Wona Sheen Technology yakapinda muCPSE 2019 muSenzhen
ne admin pane 19-10-23
Wona Sheen Technology yakapinda muCPSE 2019 muSenzhen. Wona Sheen Technology yakaburitsa akateedzana e Ultra refu renje zoom block kamera senge 860mm / 920mm / 1200mm zoom kamera, iyo yakakwezva vashanyi vazhinji. Iyo kamera yakwezva vatengi vazhinji kubvunza uye kutaurirana. Wona Sheen Tech ...
Wona Sheen Technology yakapinda muCPSE 2018 muBeijing
ne admin pane 18-10-23
Wona Sheen Technology yakapinda muCPSE 2018 muBeijing. Wona Sheen tekinoroji yakaratidza huwandu hwezvigadzirwa zvitsva, zvinosanganisira 3.5x 4K Ultra HD zoom block kamera, 90x 2MP Ultra refu renji zoom block kamera, uye UAV mbiri sensor gimbal kamera. Iyo 90x block kamera chigadzirwa chinogadzira. Ini ...
Wona Sheen Technology yakakokwa kuenda kumusangano weUAV wakaitirwa muTianjin
ne admin pane 17-10-09
Wona Sheen Technology yakakokwa kuenda kumusangano weUAV wakaitirwa muTianjin. Wona Sheen Technology yakagadzira akateedzana emakamera ekutsikisa emadhoni. Iyo kamera ine HDMI uye network interface uye inogona kuenderana nemhando dzakasiyana dzevhidhiyo yekufambisa system. Iyo drone zoom kamera inogona kutsigira sna ...